Hordhaca Austria vs. Hungary: Xulalka Ugu Kulmista Badan Yurub Oo Foodda Isdaraya Keliya Ciyaartoodii Labaad Ee Caalami Ah | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Hordhaca Austria vs. Hungary: Xulalka Ugu Kulmista Badan Yurub Oo Foodda Isdaraya Keliya Ciyaartoodii Labaad Ee Caalami Ah
Hordhaca Austria vs. Hungary: Xulalka Ugu Kulmista Badan Yurub Oo Foodda Isdaraya Keliya Ciyaartoodii Labaad Ee Caalami Ah
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 14-06-16 10:20 AM Xulalka Austria iyo Hungary ayaa furi doona ciyaaraha safka ugu dambeeya wareega koowaad ee Group F tartanka Euro 2016 caawa oo Talaado ah iyagoo foodda isku dari doona garoonka Stade Matmut-Atlantique ee magaalada Bordeaux.
Austria ayaa markeedii ugu horreysay usoo baxday ciyaaraha kama dambeysta ah ee European Championships iyadoo soo martay isreebreeb. Marka keliya ee ay hore uga soo muuqatay ciyaaraha kama dambeysta ah waxay aheyd sannadkii 2008dii laakiin markaas waxay booskooda ku heleen inay wax ka martigelinayeen tartanka.
Xulalka Kulmaya: Austria vs. Hungary
Garoonka: Stade de Bordeaux – Bordeaux
Ciyaaraha Wareega 1aad Group F – Euro 2016
Xulka Austria ayaanse rikoor wanaagsan ka heysan ciyaaraha kama dambeysta ah ee tartankaan, sideed sanno ka hor ayena ku guuldarreysatay inay badiso dhammaan seddaxdii kulan ee ciyaaraha wareega koowaad, waxaana garaacay xulalka Croatia iyo Germany, halka ay dhibcaha qeybsadeen xulka Poland.
Dhanka kale, xulka Hungary kama soo muuqan ciyaaraha kama dambeysta tartankaan tan iyo sannadkii 1972dii, balse waxaa xusid mudan in sannadkaas keliya afar xul ay ku tartameen koobkaan waana Germany, Belgium oo martigeliyeyaalka ahaa, Midowgii Sufiyeeti iyo xulkaan Hungary.
Xulkaan berisamaadkii awoodda ku lahaa kubadda cagta Yurub ayaa laba jeer laga qaaday finalka Koobka Adduunka sannadihii 1938 iyo 1954. Markoodii ugu dambeysay ee ay kasoo muuqdaan kama dambeysta tartan caalami ah waxay aheyd Koobkii Adduunka sannadkii 1986dii.
ISBARBARDHIGGA QAAB CIYAAREEDKA
Austria ayaa kusoo dhammeysatay ciyaarihii isreebreebka ee tartankaan iyagoo aan dhinacooda dhulka la dhigin waxayna badiyeen sagaal ka mid ah 10 kulan oo ay ciyaareen. Waxay sidoo kale ka mid ahaayeen xulalka ugu daafaca wacnaa ciyaarihii isreebreebka waxaana laga dhaliyey keliya shan gool tobankaas kulan. Laakiin qaab ciyaareedkaas lama aysan soo bixin ciyaarahoodii ugu dambeeyey ee saaxiibnimo waxaana laga adkaaday seddax ka mid ah shan kulan oo saaxiibnimo ah.
Xulalka ay guuldarrada kala kulmeen waa Switzerland, Turkey iyo Holland, halka ay guulo ka gaareen Albania iyo Malta, oo ka mid ah xulalka derejada hoose marka la eego qiimeynta xulalka adduunka ee FIFA.
Dhanka kale, Hungary ayaa kaalinta seddaxaad uga soo dhammeysatay safkeedii ciyaarihii isreebreebka ka dib markii ay afar kulan badisay, afar kulanna ay barbardhac gashay 10kii kulan ee isreebreebka. Ciyaar bugbax ah oo laba lugood ah ayeyna kusoo garaaceen xulka Norway si ay usoo tiigsadaan ciyaaraha kama dambeysta France.
Xulka Hungary ayaa wixii intaas ka dambeeyey ciyaaray kulamo saaxiibnimo oo tijaabo ah, waxayna afka ciidda u dareen xulalka Croatia iyo Ivory Coast balse Germany ayey guuldarro kala kulmeen ciyaartooydii iskululeyska aheyd ee ugu dambeysay.
Tababaraha xulka Austria Marcel Koller ayaan qabin dhaawacyo waa weyn oo uu ka welwelo ka hor kulankaan waxaana la filayaa inuu garoonka kusoo galo shaxdiisa ugu adag isagoo doorbidaya inuu ciyaaro hab ciyaareedka 4-2-3-1 kulankooda furitaanka Euro 2016 ee ay foodda darayaan xulka Hungary.
David Alaba ayaa ka ciyaari doona qadka dhexe, halka Marko Arnautovic iyo Zlatko Junuzovic ay weerarka ku kaalmeyn doonaan Marc Janko. Xulkaan ayaana tayo ahaan aad u wanaagsan marka ay timaado dhanka daafaca, waxayna heystaan daafacyo khabiirro ah sida waana Christian Fuchs, Sebastian Prodl, Aleksandar Dragovic iyo Florian Klein.
Dhanka kale, tababaraha xulka Hungary Bernd Storck ayaa la filayaa inuu kulankaan kusoo shirtago shaxda 4-3-3. Kabtankooda Balazs Dzsudzsak ayaana ah halista ugu daran ee xulkaan marka ay timaado dhanka weerarka. Laakiin Hungary ma heysato daafacyo khibrad leh iyo weerar saameyn leh. Balse xulkaani wuxuu si aad ah halis ugu yahay kubaddaha abaalmarinta ay u helaan sida laadadka xorta ah iyo koornooyinka.
Goolhaye Gabor Kiraly oo 40 sanno jir ah, ayaa noqon kara ciyaaryahanka ugu dhallinta badan ee ka ciyaara Euro 2016 xagaagaan haddii uu tababare Strock go’aansado inuu kusoo bilaabo kulankaan.
Meel ku qoro, kulanka dhexmara xulalka Austria iyo Hungary ayaa ah midka labaad ee ugu badan ee ay ciyaaraan xulal qaran oo kubadda cagta ah, keliya xulalka Argentina iyo Uruguay ayaana ku kulmay kulamo ka badan inta ay foodda isdareen xulalka Austria iyo Hungary.
Austria iyo Hungary ayaa wadar ahaan kulmay 137 jeer, Hungary ayaa badisay 66 jeer, halka Austria ay badisay 40 jeer, 31 kulan ayeyna barbardhac ku kala bexeen labadaan xul.
Si kastaba ha ahaatee, marka ay timaado ciyaaro tartan rasmi ah Austria ayaa la kulantay xulka Hungary keliya hal jeer waana Koobkii Adduunka ee sannadkii 1934tii lagu qabtay dalka Italy, labadaan xul ayaa foodda isku daray ciyaarihii wareega quarter-finalka, Austria ayaana 2-1 ku badisay.
Kulankoodii ugu dambeeyey wuxuu labadaan xul dhexmaray bishii August 2006dii ciyaartaas oo ka dhacday magaalada Graz ee dalka Austria, Hungary ayaana 2-1 ku badisay kulankaas.
Austria (4-2-3-1): Almer – Fuchs, Prodl, Dragovic, Klein – Alaba, Baumgartlinger – Arnautovic, Junuzovic, Harnik – Janko.